Ny fanatanjahan-tena aerobika dia matetika ataon'ny olona te hihena ary hahazo tanjaka. Ny iray amin'ireo malaza indrindra sy malaza indrindra amin'ny gym amin'ny manodidina ny planeta dia ny bisikileta ergometrika, izay ilay bisikileta tsy mihetsika, manana ny lalany, ny hamafiny, ny heriny ary azo ampiasaina amin'ny fomba samihafa.
Betsaka ny olona tsy mahalala ny tena soa azo avy amin'ny fampiasana bisikileta fanatanjahan-tena. Tena mihena tokoa ve izy? Manamafy ny tongotrao? Inona no lanjan'ity fanazaran-tena ity? Ireo fanontaniana rehetra ireo sy ny maro hafa dia ho voavaly eto sy izao. Zahao hoe!
Ny fampiasana bisikileta fanatanjahan-tena dia miovaova, fa ny tena asany dia ny fanatanjahan-tena aerobika izay hiteraka fatiantoka kaloria sy lanjany, vokatr'izany. Na izany aza, tsy mijanona eo io.
Ho fanampin'ny fanampiana anao hahavery kilao vitsivitsy, ny bisikileta fanatanjahan-tena dia tsara amin'ny famaritana sy fanamafisana ny tongotrao rehefa mampiasa kodiarana mavesatra sy mahery vaika kokoa ianao. Izy io koa dia afaka manampy manify ny valahanao, manome anao fiaretana bebe kokoa, manatsara ny fisefoanao, misoroka aretina aretim-po ary mampihena ny adin-tsaina.
Raha atao teny hafa, ny tombony azo avy amin'ny fampiasana bisikileta fanatanjahan-tena dia mifandraika matetika amin'ny valin'ny fampihetseham-batana ka hatramin'ny fahaizana manasitrana sy misoroka olana ara-batana sy ara-tsaina. Fanatanjahan-tena tanteraka izay miasa amin'ny faritra samihafa amin'ny fiainan'ny olona.
Mihena ve ny bisikileta fanatanjahan-tena?
Ny tena fiasan'ny bisikileta fanatanjahan-tena dia ny fandoroana kaloria sy ny fihenan-danja vokatr'izany. Saingy tsy ilaina ny mandany antsasak'adiny na adiny iray amin'ny fitaovana ary avy eo mihinana izay mety aminao. Ilaina ny manambatra fampihetseham-batana mahery vaika amin'ny sakafo voalanjalanja, salama ary ambany kaloria.
Noho izany, ho anao tena hahavery lanja dia mila mandany kaloria kely kokoa noho ny may ao anatin'ny iray andro ianao. Ho an'ity, ny bisikileta fanatanjahan-tena dia hanampy anao, satria handoro kaloria be dia be izy io ary, amin'ny sakafo mety, dia handany kely kokoa ianao ary hihena.
Tsena maimaim-poana sa OLX? Aiza no hividy?
Samy miasa ny orinasa roa tonta. Ireo dia tranokala mamoaka ny vokatry ny olon-kafa ary tsy manome toky anao raha manana kalitao na tsia io fitaovana io.
Mila mitandrina ianao. Mercado Livre dia manolotra safidy azo antoka kokoa, toy ny fanombanana, tolo-kevitra ary Mercado Pago fa ianao ihany no mandoa ny vokatra aorian'ny nahazoanao azy. Ka amin'ity tranga manokana ity dia azo antoka kokoa noho ny OLX izy io.
Ho an'ny fividianana bisikileta fanatanjahan-tena dia tsy nahita safidy tamin'ireto magazay roa ireto izahay. Ny orinasa manana fitaovana lehibe indrindra amin'ity habe hitantsika ity dia Netshoes.
Ny sanda dia manomboka amin'ny $ 249,99, vidiny lafo indrindra, nefa miaraka amin'ny fitaovana tsotra kokoa… Hatramin'ny 6.000,00 $, izay efa maodely amin'ny bisikileta mandroso kokoa. Tsindrio ny bokotra etsy ambany ary zahao izany:
Matevina ny tongotrao ve?
Misy karazana fampiharana marobe azo atao amin'ny bisikileta fanatanjahan-tena. Raha mitaingina làlana matanjaka kokoa ianao izay manome lanja ny tongotrao, dia tena hiteraka fanoherana bebe kokoa izany fampihetseham-batana izany ary hampitombo ny hozatra amin'ny feny sy ny faritry ny zanak'omby.
Arak'izany, ny zava-drehetra dia miankina amin'ny karazana fampihetseham-batana ataonao amin'ny bisikileta mijanona ary misy ny fahafaha-manao ho an'ireo izay maniry hanamafy ny tongony ary hahatonga azy ireo ho tsara tarehy sy matanjaka kokoa.
Araka ny voalaza tao amin'ireo lohahevitra teo aloha, ny fampiasana bisikileta fanatanjahan-tena dia manana tombony maro ho an'ny atleta iray. Amin'ny fampiasana azy tsara sy isan'andro, dia hankafizinao:
Fanamafisana ny hozatry ny tongotra
Fanoherana ny vatana ambany
Mihena ny alahelo sy ny hakamoana
Raha te hividy bisikileta efa niasa ianao, dia tsara raha manao fikarohana ary hahitana raha mandeha tsara izany. Misy safidy maromaro ho an'ny olona mivarotra samirery na amin'ny tranokalan'ny fitaovana ampiasaina.
Manaova fikarohana tsara mba tsy hividy vokatra tsy mandeha tsara. Mitadiava koa referansa, tolo-kevitra ary jereo ny naoty avy amin'ny mpivarotra karohinao amin'ny bisikileta fanatanjahan-tena.
Caloi dia iray amin'ireo marika bisikileta lehibe misy. Ary mampiasa vola amin'ny bisikileta fanatanjahan-tena koa izy. Izy ireo dia vokatra tsara avy amin'ity orinasa ity ary azonao atao ny mividy azy ireo tsy misy olana.
Misy safidy maromaro hatramin'ny mora indrindra ka hatramin'ny lafo indrindra. Ny sasany mitentina R $ 300,00 ary ny sasany mihoatra ny 5. Hiankina amin'ny safidinao izany.
Ary ny bisikileta fanatanjahan-tena mitsivalana?
Misy karazana bisikileta fanatanjahan-tena hafa ihany koa izay hita amin'ny toerana fanazaran-tena rehetra. Izy io dia manana endrika marindrano kokoa ary miasa ho toy ny fanatanjahan-tena aerobika ihany koa mba hampihena ny lanjany, ankoatry ny fanamafisana, indrindra ny faritra zanak'omby.
Raha hividy ka hanana iray ao an-trano dia mety ho hitanao ao amin'ny Netshoes ihany koa izany, nefa misy vidiny kely kokoa. Tsindrio ary zahao:
Raha nankafizinao ity lahatsoratra ity momba ny tombotsoan'ny bisikileta fanatanjahan-tena dia mba zarao amin'ireo sakaizanao gym.
Tags:fitaovana fanaovana fanatanjahan-tenafanazaran-tena